Hery Vaovao ho an’i Madagasikara : Manamafy hatrany ny fanohanany an-dRajaonarimampianina -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Vaovao ho an’i Madagasikara : Manamafy hatrany ny fanohanany an-dRajaonarimampianina
Mazava. Tsy miova amin’ny foto-kevitra hijoroany ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, na ny HVM. Manaporofo izany ny fanambaran’ny filoha nasionalin’ny HVM, Rivo Rakotovao, nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety, nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ôfisialy ny fidirana politikan’ny antoko taorian’ny fialan-tsasatra.
Araka izany, nanambara ny filoha nasionalin’ny HVM fa tsy miova amin’ny foto-kevitra hijoroany izy ireo. Noho izay indrindra, voalaza fa tsy mivily amin’ny fanolorana ny Filoham-pirenena am-perinasa, Hery Rajaonarimampianina, ho kandidà ho Filoham-pirenena amin’ny Fifidianana, taona 2018, ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara.
Voalaza hatrany fa amin’izy ireo, izany hoe, ireo mpikambana eo anivon’ny HVM, mety miova ny tontolo politika ary toraka izany koa ny fifandanjan-kery. Saingy, efa eo am-pandinihana an’izany rehetra izany ny eo anivon’ny antoko amin’izao fotoana izao. Maro ihany koa anefa ny dingana efa nolalovan’ny antoko HVM nanditra ny telo taona nijoroany. Maro ny fanenjehana sy ny famendrofendroana ary resaka nifamahofaho tao anatin’izay saingy, raha ny voalaza, sahy mijoro hatrany ho an’ny fampandrosoana ny firenena ny antoko HVM ary sahy mifaninana ihany koa.
Ankoatra izay, nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivon’ny HVM mikasika ny lazan’ny atoko fa manana fahatokisana izy ireo ny amin’izany. “Ny manao zavatra tsy mora ary tanjona sy laharam-pahamehana ny fanarenana ny firenena. Misy ny efa vita ary misy ihany koa ny mbola tsy vita fa mbola eo am-panatanterahana azy, ary hiezaka amin’izany ny antoko”, hoy ny filoha nasionaly, Rivo Rakotovao. Nohamafisiny ihany koa fa manana olona manerana an’i Madagasikara ny antoko HVM.
Betsaka ary maro ny asa fampandrosoana ny firenena tontosan’ny Fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Noho izay indrindra, manohana ny Filoham-pirenena hatrany ny antoko HVM ary manolotra azy ho kandidà amin’ny Fifidianana 2018.